ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း MM စီးရီး CA76MM RCA76MM NBR diaphrag ...
DC24V 1 "ဖြောင့် type ကိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
Ambient အပူချိန်: -5 ~ 55
အလုပ်အဖွဲ့အလတ်စား: Clean Air
ဗို့အား: AC220V DC24V
မြှေး Life: တစ်ခုမှာသန်းသံသရာ
ဆိပ်ကမ်း Size: 1 "
ခန္ဓာကိုယ်: လူမီနီယမ် (diecast)
Ferrule: 304 အက်စ်အက်စ်
Armature: 430FR အက်စ်အက်စ်
တံဆိပ်ခတ်ထားလော့ Nitrile သို့မဟုတ် Viton (အားဖြည့်)
နွေဦးရာသီ: 304 အက်စ်အက်စ်
ဝက်အူ: 302 အက်စ်အက်စ်
မြှေးပစ္စည်း: NBR / Viton
1. အဆို့ရှင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ပေးဝေရေးနှင့်ထိုးနှက်ပြွန်ပိုက်များပြင်ဆင်ပါ။ install လုပ်ရှောင်ကြဉ်ပါ
2. အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်ပိုက်များဖုန်, သံချေးများသို့မဟုတ်အခြားအမှုန်ကိုရှောင်ကြဉ်သေချာစစ်ဆေးပါ။
အဘယ်သူမျှမပိုလျှံချည်သေချာသည် baghouse မှပိုက်များနှင့်ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်မှအဆို့ရှင် mount သည့်အခါ 4,
sealant ယင်းအဆို့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းအဆို့ရှင်နှင့်အပိုက်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ။
5. controller ကိုမှ solenoid ကနေလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှု Make သို့မဟုတ်အဆို့ရှင်စမ်းသပ်လုပ်ငန်းများ RCA ရှေ့ပြေး port ကိုချိတ်ဆက်
6. စနစ်အလယ်အလတ်ဖိအား Apply နှင့် installation ကိုပေါက်ကြားမှုအတွက်စစ်ဆေးပါ။
7. အပြည့်အဝ system ကိုဖိအားပေးရန်။
1 "ASCO သွေးခုန်နှုန်း TPE / NBR မြှေးပစ္စည်းများ valves
အရည်အသွေးကောင်းတစ်ဦးချင်းစီစိတျအပိုငျးတစျခုစီထုတ်လုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာ check လုပ်ထားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဘက်ကလိုက်လျောညီထွေအသင်းတော်ကိုလိုင်းထဲသို့သွင်းထားနှင့်အတူမြှေး, အပေါငျးတို့သအဆို့ရှင်အဘို့ကိုရှေးခယျြသုံးရကြလိမ့်မည်တင်သွင်းခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်လက်စသတ်အဆို့ရှင်ကိုစမ်းသပ်မှုတ်ယူရမည်။
- 120C (Nitrile ပစ္စည်းမြှေးနှင့်တံဆိပျ), -29 - 232C (Viton ပစ္စည်းမြှေးနှင့်တံဆိပ်ကို) -40: အပူချိန် Range
loading အချိန်: ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိ 7-10 ရက်အကြာမှာ
အာမခံ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အာမခံ 1.5 တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်, အားလုံးအဆို့ရှင်အခြေခံ 1.5 တစ်နှစ်ရောင်းသူအာမခံနှင့်တကွကြွလာ 1.5 တစ်နှစ်အတွက်ကို item ချွတ်ယွင်းလျှင်, ကျနော်တို့ပြီးနောက် (ရေကြောင်းကြေးအပါအဝင်) အပို charger ကိုမပါဘဲအစားထိုးပူဇော်ပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ကချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်လက်ခံရရှိသည်။
ယခင်: PD40 1.5″ double head quick fittings
နောက်တစ်ခု: ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း MM စီးရီး CA76MM RCA76MM NBR မြှေး goyen pneumatic tank သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထား
Air ကို Thread Bag Valve
Air ကို Thread Valve
differential ဖိအား Air ကို Valve
လျှပ်စစ် Actuator Ball ကို Valve
Rexroth အချိုးကျ Valve
PS40 1.5 "ကြင်ဖော်မဲ့ခေါင်းကို bulkhead connector ကို ...
FP40 DP40 1.5 လက်မတာဘိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် viton diap ...
2 လက်မ DN50 သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် DMF-Z-50s DMF-Y ကို-50s DIA ...
230V AC အတာဘို solenoid ကွိုင်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်